IGarajiBand 2.2 ye-iOS ifikile inezinto ezininzi ezintsha | IPhone iindaba
IGarajiBand 2.2 ye-iOS ize neetoni zezinto ezintsha
Njengoko usazi kakuhle, iGarageBand sesinye sezixhobo ezifanelekileyo zokudala umculo esinokuzifumana kuzo zombini i-iOS kunye neMacOS. Kwi-iOS sisixhobo sokwenyani esinokukwenza ukuba udale iingoma ezithandekayo ezivela kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad, yonke into iya kuxhomekeka kwimida ozibekele yona. Njengoko isihloko sisitsho, iGarageBand 2.2 ngokuqinisekileyo ifikile kwi-iOS ukuze iphumeze izinto ezintsha ezingayi kushiya nabani na ongakhathaliyo. Hlala nathi kwaye ufumane ngokukhangela kwaye ngokukhawuleza zithini iindaba Unokulindela ntoni kwesi sicelo sivela kwinkampani yeCupertino.
Okokuqala siza kuba neendaba malunga nokurekhoda, ngoku siya kuba nakho ukurekhoda nge «thabatha ezininzi»Iyafumaneka, njengeLogic Pro ye-macOS. Unokurekhoda ii-audios ezahlukeneyo ngaxeshanye ukuba ulwazi lwakho lobuchwephesha luyakuvumela. Ukongeza, ungafaka isandi esitsha sombulelo kwipaneli ephuculweyo kwaye esivumela ukuba songeze kuyo Iiyunithi zomsindo.
Siyaqhubeka nemixube, Iipatches ezintsha ze-150 kunye neempawu Ukuphucula umgangatho weaudiyo kufuneka uwuphucule, oku kuyabulela kuAlchemy, eyona nkqubo ikhethekileyo yokuhlanganisa, onokuyibona kule vidiyo inika umdla. 9to5Mac.
Ukutshintshela kuhlobo olutsha lwesicelo, kuya kufuneka uhlaziye ngokuthe ngqo kwiVenkile yeApple, okanye uyikhuphele, khumbula ukuba isimahla kubo bonke abasebenzisi abathenga isixhobo seApple ukusukela ngo-2014 ukubheka phambili. inobunzima be-1,70GB akukho nto ingaphantsi kwaye iguqulelwe kwiilwimi ezininzi, njengoko unokucinga ukusuka kwisicelo seApple kunye nezinto ezinomdla. Kulungiselelwe abo bangakhange bakwazi ukusebenzisa uhlobo lwasimahla, Kuya kufuneka bahlawule i- € 4,99 Ukufumana into engathandabuzekiyo yeyona app yokudala umculo kwiVenkile yeApple yeApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » IGarajiBand 2.2 ye-iOS ize neetoni zezinto ezintsha
IStanford yokuphanda ukuSebenzisa okuTsha kwe-Apple Watch yezeMpilo
Izabelo zeApple bezingaphakamanga kangako ukusukela ngo-2015